Zvinonyanya kunakidza izvozvi muPhilippines mune rustic, inozorodza yekugeza inopisa muKawa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Philippines Kupwanya Nhau » Zvinonyanya kunakidza izvozvi muPhilippines mune rustic, inozorodza yekugeza inopisa muKawa
Hospitality Industry • LGBTQ • nhau • vanhu • Philippines Kupwanya Nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kawa kugeza muAntique
Kunyemwerera kwePhilippines mashiripiti akachena kune vazhinji vari munyika, uye Nyika yekuEast Asia iyi yagadzirira zvekare kugamuchira vashanyi.
Wadii kukurudzira kutora kawa yekugeza. Dhipatimendi rePhilippine reKushanya rinovimbisa rustic. uye chiitiko chekuzorora
Philippines 'Dhipatimendi Rezvekushanya (DOT) inogadzirira kugamuchira vashanyi zvakare, iri kuramba ichigadzira zviitiko zvitsva zvevafambi kuti vasangana nazvo vachiita chokwadi chekuti ese maprotocol epasi rese ekuchengetedza anosangana munzvimbo dzakasiyana siyana.
Izvo zvinonyanya kunakidza muPhilippines, nemabasa ari kugadziridzwa neDOT kuti ipe chiitiko chitsva uye chakasarudzika kune vashanyi vepasirese. Hurumende yePhilippines inogadzirira kugashira vafambi nekuvandudzwa kwezvivakwa kusanganisira kuvandudzwa kwenhandare dzekunze nedzenyika dzepasi rose nemigwagwa mitsva yekuona kupinda nekukasira kunzvimbo dzatinonamira, "akadaro Munyori wezvekushanyirwa, Bernadette Romulo-Puyat.
Iine zviwi zvinopfuura zviuru zvinomwe zvinopa ruzivo rwakasiyana kune vashanyi, Philippines inzvimbo yekuenda isina kufanana nechero ipi. Kunyangwe kuri kutandara pamahombekombe kana kumakomo, kunakidzwa nehupenyu hweguta, kana kunyudzwa mutsika yetsika, akasiyana zviitiko zveakasiyana-siyana zvemarudzi ese evafambi.
Heano zviitiko zvisere zvakasarudzika zvePhilippines munhu anogona kuyedza kubva kumatunhu akasiyana enyika:
1. Kutenderera kutenderera Intramuros pane Bamboo Bike
Tora yako yekuchovha bhasikoro mudenga notch uchishandisa yemishenjere mabhasikoro. Bambike Ecotours inopa mukana wekutsvaga nhoroondo yeguta rakakombwa nemasvingo eIntramuros neimwe nzira. Aya mabhasikoro emishenjere anouya mune dzakawanda sarudzo dzekufamba kwakachengeteka uye kwakasununguka neBambassadors vanoita sevatungamiriri pane ekare Manla akasiyana masango.
2. Kuwedzeredza kuburikidza neBanaue's Winding Roads paMatanda Bhasikoro
Ndeipi nzira yakanakisa yekunakidzwa neyekuyemurika maonero e2,000-gore rekare rakagadzirwa nevanhu mupunga masango muBanaue? Ehe, nemaputi scooter akavezwa nemaoko neboka rimwe chete rezvizvarwa, hongu! Yakagadzirwa nezvimedu zvehuni uye zvidimbu kubva pamatairi ekare erabha, aya maviri-mavhiri anogona kuenda nekukasira se50kph, uye ichokwadi humbowo kune hunyanzvi uye hunyanzvi hwevanhu veIfugao.
3. Edza Yako Balance pane Bamboo Stilts muCebu
Iyo Kadang-Kadang kana Bamboo stilts inoita kuti vashanyi vaone iyoPhilippines kubva pane zvishoma nzvimbo yepamusoro yekutarisa. Vashanyi kuCebu vanogona kuyedza chiyero chavo uye nekumhanyisa nekusvetuka peya stilts uye kutora chikamu mumujaho wechikwata unomhanya (kana kubvunda) kwemamita zana. Inofungidzirwa semutambo wehucheche kuburikidza nezvizvarwa, yakave ichizivikanwa semutambo wechivanhu pasi peLaro ng Lahi muna 100.
4. Enda Kunzira-Mugwagwa paLahar Adventure muPampanga
Kuputika kwePinatubo kwakakonzera kuparadza kunzvimbo zhinji dzeCentral Luzon, asi vagari veko vakawana nzira yekushandisa kuyerera kwerahwi kubva kugomo uye ndokuiita nzvimbo yekufarira vanofarira mitambo zvakanyanya. Vafambi vane kudiwa kwekumhanyisa vanogona kubhuka rwendo rwekusiya-mugwagwa pane 4 × 4 kana mudhudhudhu unotasva kuburikidza nenzizi nenzvimbo ine jecha kuburikidza neimwe yenzvimbo dzakasarudzika muPhilippines.
5. Zorora mubhawa reKawa kuAntique
Iyo Kawa kana hofori kapu inowanzo shandiswa kubika fiesta mari muPhilippines, asi mudunhu reAntique, inopa rustic uye inozorodza ruzivo. Nzvimbo dzenzvimbo dzemakomo dzinogamuchira vashanyi mushure merwendo musango reTibiao ine yekugezesa inopisa inopisa mukawa, ine mvura inopisa pamusoro pehuni moto uye inonhuwirira nemiti inonhuhwirira nemaruva. Ivo avo vanoda kusangana nerumwe rudzi rwekurapa vanogona kushanyira Tibiao Fish Spa uko kwavanogona kunyudza tsoka dzavo mudziva rehove kuti dzifunge uye kubvisa.
6. Shanyira iyo Philippine Eagle muDavao
Huya ushanyire gondo rinoshamisa rePhilippines, makondo makuru pane ese aripo munyika. Iyi mhuka iri panjodzi inochengetedzwa inochengetedzwa munzvimbo dzakasarudzika senge Gomo reHamiguitan Range Wildlife Sanctuary muDavao. Rwendo runonetsa rwunopihwa mubairo wepfuma yekuona kusanganisira mukana wekutarisa Philippines Makondo achitiza.
Kuti uone nekukurumidza, vashanyi vangasarudzawo kushanyira Philippine Eagle Center, inonaya mvura inonaya mvura muDavao City inoviga uye inobereka Philippine Eagles mukutapwa.
7. Dzidza Unyanzvi Hwemuno hweKucheka muCordillera jira redunhu
Iwo madzinza ekumusoro eCordillera Dunhu ane hupfumi tsika dzakarukwa mumachira avo. Rwendo urwu rwunounza vafambi kunoshamisa kuratidzira uye kuratidzira kuratidzwa kwemicheka inogadzirwa mudunhu vachishandisa donje uye mamwe mafirita echisikigo akarukwa uye akafukidzwa mumagadzirirwo avo echinyakare akapfuura kuburikidza nezvizvarwa. Kumira kwekushanya kunosanganisira kuruka misha uye mamiziyamu, nemikana yekuenda kunzvimbo yekuyeuchidza yezvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko zvakagadzirwa muzvinhu zvinoshamisa zvembatya kana kuiswa muzvidimbu zvekushongedza.
8. Organic Green Kuratidzwa (OGT) Dunhu
Iyi dunhu inoteedzera iyo yekuPhilippines chikafu midzi kuburikidza nemubatanidzwa we organic mapurazi marwendo uye echinyakare chikafu uchishandisa zvichangobva-kukohwewa zvigadzirwa. Rwendo urwu runopfuura neBaguio-La Trinidad-Itogon-Sablan-Tuba-Tublay (BLISTT) nzvimbo ine nzvimbo dzekushanyira mapurazi muBenguet Agro-Eco Farm muSablan uye UM-A Farm muTuba. Vaenzi vanogona kunhonga zvavo zvibereko uye vanogona kutora chinyakare munharaunda kupemberera vakakomberedza bonfire mukati mutsva mhepo yemakomo.
Yakagadziriswa matanho ekuchengetedza
Izvi zviitiko zvinomirira kudzoka kwako kuPhilippines uko kudziya kwenyika kunoenderana neiyo yekugamuchira vaeni. Simbisa zviitiko zvako zvekufamba nekuyedza zviitiko izvi zvitsva zvinogara zvakagadzirwa neDOT. Ipo nyika ichimirira kuvhurwa, vashandi vekuPhilippine vekushanya vari kugara vachidzidziswa. Zvivakwa zvinoshandisa zviyero zvakaenzanirana munzvimbo mavo kuchengetedza vashanyi vavo nevashandi, kuve nechokwadi chekuti avo chete vanobvumidzwa ndivo vanobvumidzwa kuvhura nekutambira vashanyi.
DOT yakapihwa SafeTravels Stamp neWorld Travel uye Tourism Council nekutora kwayo "hutano nehutsanana zvepasirese zvimisikidzwa" izvo zvichave nechokwadi chekufamba kwakachengeteka panguva yedenda.
Hurumende yePhilippine kuburikidza neInter-Agency Task Force yeManagement yeEmerging Infectious Diseases iri kugara ichivandudza zviga zvayo kuchengetedza vafambi.
Kuziva izvo zvazvino zvitsva uye maratidziro ekufambisa nezve kushanya kwePhilippines https://www.philippines.travel/safetrip